Saturday August 24, 2019 - 18:57:03 in Wararka by
Wadanka Baraaziil waxaa cirka iskusoo sheeraraya dabkii ka kacay keymaha caanka ah ee lagu magacaabo Amazon, dowladaha reergalbeedka iyo Q.midoobay ayaa walaac ka muujinaya gubashada Keymahan oo lagu sheego kuwa ugu ballaran caalamka.
Machadka Baraaziil ee cimillada ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in wax kabaan 70 kun oo xaalado gubasho ah ay lakulantay keynta Amazon oo ah dhul howd ah oo kuteedsan wadamo ay kamid yihiin Kolombiya,Beeruu iyo wadama kale oo dhaca qaaradda Ameerikada Koonfureed.
Madaxweynaha wadanka Baraaziil ayaa khudbad uu ka jeediyay Telefeshinka ku hadla afka dowladda wuxuu ku sheegay in ay baarayaan sababta keentay gubashada keynta Amazon oo ah midda ugu weyn caalamka uguna cagaarka badan,
Madaxweynaha Baraaziil ayaa dhaleeceeyay cambaaraymaha caalamka uga imaanaya ee ku aaddan in dad dhirta xaalufiya ay mas'uul ka yihiin gubashadan.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku eedeeyay dowladda Baraaziil in ay ka gaabinayso daminta dabkan.
Dowladda Faransiiska waxay sheegtay in gubashada keyntan ay sababi doonto musiibo weyn gaar ahaan cimillada adduunka iyo wasakheynta hawada, Faransiiska ayaa madaxweynaha Baraaziil ku eedeeyay in uu ka been sheegay sababta keentay in dabku kaco waxayna Baraaziil wajahaysaa dhaleeceymo caalami ah oo ku aaddan in aysan dhab ka aheyn heshiiskii cimilada oo ay horay usaxiixday.
Sawirro uu qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinaya holac iyo qaac ka baxaya keymaha Amazon oo dowladaha reergalbeedku ku sheegaan wadnaha caalamka ee dhanka bay'ada ama deegaanka, keymahan waa kuwa badanaa roobku uu ku da'o waxaa laga helaa kumanaan kun oo nuucyada dhirta ah, masaaxada ay keyntaan ku fadhido ayaa gaaraysa 5.5 milyan oo kiiloowmitir isku weer ah.
Sida wararku sheegayaan keymahan ayaa 48-dii saacadood ee lasoo dhaafay lakulmay illaa 2.500 oo xaaladood gubasho ah, hay'ada reergalbeedka ee sheegta in ay udhaq dhaqaaqaan arrimaha deegaanka ayaa ku eedeeyay beeralay Baraaziiliyaan ah oo dowladda xiriir laleh in ay keynta Amazon ku hayaan xaalufin sida iyagoo jaraya geedaha islamarkaana dhulka baynayna si ay uga dhigaan beero lagu tacbo qasabka sonkorta laga sameeyay oo ah maaddo uu dhaqalaalo boqolaal milyan oo dollar ah sanad walba kasoo galo dowladda.